Ilhaan Cumar oo noqotay qofkii u horreeyay ee Somali ah oo ka mid noqday Koongareeska Mareykanka | Berberanews.com
Home WARARKA Ilhaan Cumar oo noqotay qofkii u horreeyay ee Somali ah oo ka...
Ilhaan Cumar oo noqotay qofkii u horreeyay ee Somali ah oo ka mid noqday Koongareeska Mareykanka
Ilhaan Cumar oo ah gabar soomaaliyeed ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay oo ka tirsan dadka qaxootinimada ku tahay Mareykanka ee ka mid noqda Koongareeska Mareykanka.
Ilhaan Cumar oo 36 sano jir ah ayaa taariikh sameysay ka dib markii ay noqotay qofkii ugu horreeyay oo Soomaali ah oo xildhibaan ka noqdo dalka Maraykanka.
Halkan ka akhriso shan arrimood oo ku saabsan Ilhaan.
1. Waxay Soomaaliya ka qaxday xilligii dagaalka sokeeye iyadoo 8 sano jir ah
2. Muddo afar sano ayay ku nooleyd xerada qaxootiga ee Dhadhaab
3. Waxay Maraykanka tagtay iyadoo 12 sano jir ah
4. Eryada Ingirriska ee ay taqaanay markii ay Maraykanka gaartay waxay ahaayeen “salaanta” iyo ”aamus” oo kali ah
5. Waxay noqotay qofkii Soomaaliga ahaa ee ugu horreeyay ee lagu doorto Maraykanka.
Wararka kale ee doorashada
Xarumaha codbixinta ee doorashada dalka Maraykanka ayaa billaabay in ay xirmaan, warbaahinta dalkaasina waxay billawday baahinta natiijooyinka horudhaca ah ee doorashooyinka xiliga dhexe, codayntan ayaa go’aamin doonta cidda hoggaamin doonta aqalka congaresska iyo qaabaynta ajandeyaashaMadaxweyne Trump.
Toddobo xubnood oo aqalka Senetka ku matalayay xisbiga Dimuqraadiga ayaa loo malaynayaa in ay difaacdeen kuraastoodii gobollada waqooyi bari, deegaannadaasna waxaa ka mid ah Connecticut, Massachussetts iyo Pennsylvania.
Soddon iyo shan xubnood oo aqalka Senetka ah ayaa dhanka kalana loo loolamayaa, si xisbiga Dimuqraadigu uu u helo aqlabiyaddana wuxuu u baahan yahay in uu ku guulaysto labo kursi oo Jamhuurigu horay u ugu fadhiyay.
Dhanka kalana Xisbiga Dimuqraadigu wuxuu u baahan yahay ugu yaraan saddex-iyo-labaatan kursi si uu aqlabiyadda gollaha wakiillada u hantiyo.
Warbaahinta CBS ayaa saadaalinaysa in xisbiga Dimuqraadigu uu kursi ka helay Virginia, Jennifer Wexton ayaana ka guulaysatay Barbara Comstock oo aad u taageerta Trump.
Gobolka Floridana waxaa ku guulaysatayDonna Shalala oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan.
Soddon iyo lix gobol oo dalka Maraykanka ku yaalla ayaa sidoo kale dooranaya badhasaabyo. Labada gobol ee aadka isha loogu hayo ayaa kala ah Florida and Georgia. Stacey Abrams ayaana rajaynaysa in ay noqoto badhasaabkii ugu horreeyay ee madaw ah ee gobolkaas badhasaab ka noqota.
Previous articleMadaxweynihii Koonfur-galbeed ee Somalia oo iscasilay
Next articleWasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland oo gaadhay Laascaanood